Ra iisal wasare Kheyre oo Arima Xasaasi ah ka wada hadlay Wakiilka midowga Yurub ee Soomaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra iisal wasare Kheyre oo Arima Xasaasi ah ka wada hadlay...
Ra iisal wasare Kheyre oo Arima Xasaasi ah ka wada hadlay Wakiilka midowga Yurub ee Soomaliya
Ra’iisul Wasaaraha dowlada Soomaaliya Mudane Xassan Cali Khayre oo shalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midawga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga.
Kulanka Ra’isul Wasaare Kheyre iyo Nicolad Berlanga ayaa looga hadlay arimo xasaasi ah oo ay kamid yihiin qabsoomidda doorashada heer qaran, dibu-u-habeynta amniga iyo dhammeystirka qorshaha deyn cafinta.
Safiirka midawga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga, ayaa hor dhigay Ra’isul Wasaare Kheyre in muhiim tahay in la qabto doorasho loo dhan yahay ayna raali kawada yihiin dhinacyada siyaasada Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa gacan ka geesanaya qabsoomida iyo taageerada doorashada Soomaaliya, waxaana midowga Yurub horey usoo dhaweeyeen labo nuuc doorasho ay soo bandhigeen guddiga doorashooyinka Qaranka Soomaaliya.
Doorashada Soomaaliya ayaa loo badinayaa in ay ka dib dhacdo xiligii horey loo qorsheeyay, waxaana siyaasiyiinta mucaardaka shaki badan ka qabaan in mudo kororsi daacsan yihiin Madaxda dowlada hogaamisa.
Previous articleMadaxweynaha iyo Ra iisal wasaaraha Oo xalay kulan Saacada Badan qaatay Yeeshay
Next articleMaamulka Galmudug oo war ka soo saaray Kulanka 8 Bisha iyo Maamul Goboleyyada
Magaalada Ganacsiga Kenya oo u qurux badan
Doorashada Mareykanka: Maxay u adkaatay in laga codeeyo Mareykanka?